Mitsubishi F-1 kemgbe mbụ ọgụ ugbo elu e mere na arụpụtara ke Japan ebe ọ bụ na ọgwụgwụ nke WWII. Dabere na elu ndị ọzụzụ Mitsubishi T-2, isi nzube nke a nnụnụ, dị ka e maka ikuku na oké osimiri ọgụ, bụ obibi ọnyà Air ka elu zaa Ọzọkwa, a na-agụnye nwekwara a mmachi ikike maka ikuku kara ọzọ. 77, F-1 e napụtara, ha arụmọrụ ndụ malitere ke mbubreyo 70 '. Nke a variant a ugbu a na e dochie anya ndị ọhụrụ Mitsubishi F-2 (Web-isi: Wikipedia)
Nlereanya a na-agụnye edozi ihe patches na upgrades. The okirikiri nhọrọ ukwuu nke Mitsubishi F-1-echetara ndị Jaguar.
Ebe a gụnyere anọ variants:
-Mk82 Mpụga bọmbụ ibu
-ASM-1 na ASM-2 agha mmiri akụ ụta
An Ai nlereanya bụkwa maka weebụ gị na ndị ọzọ. The mebere kokpiiti na-emeso na photorealistic textures, mbụ ụda ngwugwu, Auto nstallation mode dị. A ga-enwe.
Onye edemede: Daisuke Yamamoto Peinted nke Hiroaki kubota (KBT) sitere n'aka Toshikazu Shimizu. Na-ahazi ka arụ ọrụ OK na FSX nke Danny Garnier dere